मन्त्रीज्यू, दशैं आयो त ! खै मेलम्चीको पानी ? | Public 24Khabar
Home News मन्त्रीज्यू, दशैं आयो त ! खै मेलम्चीको पानी ?
यस वर्षको दशैँ एक महिना लम्बिएर आयो । सरकारी दाबीअनुसार यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकाका धारामा मेलम्चीको पानी झर्नुपर्ने थियो तर बोनसमा एक महिना पाउँदा पनि मेलम्चीको पानी धारामा चुहिएन । यससँगै निर्धारित समयभन्दा तीन महिनाअगावै काम सकेर बोनस खाने ठेकेदार कम्पनीको लक्ष्य पनि प्रभावित भएको छ ।
अन्ततः पानी पथान्तरणको वैकल्पिक संरचना (अस्थायी डाइभर्सन)बाट सुरुङमा पानी पठाएर २०७७ को दशैँसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने खानेपानी मन्त्रालयको घोषणा घोषणा मै सीमित भयो । सुरुङमा जडान गरिएको (गेट) प्रवेशद्वारलाई पथान्तरण गरिएको पानीले भत्काएपछि यो दशैँमा पानी ल्याउन सम्भव नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अन्तिम अवस्थामा अम्बाथानको प्रवेशद्वार भत्किएपछि चारवटै प्रवेशद्वारको पुनःनिर्माण गर्नु परेकाले पानी आउन ढिलाइ भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य भन्नुहुन्छ, “अस्थायी डाइभर्सनबाट मेलम्चीको पानी ल्याउने अन्तिम तयारीमै थियौँ । परीक्षणका लागि पानी पथान्तरण गर्दा एक्कासि गेट खुल्यो, दुर्घटना भयो । त्यो नभएको भए अहिलेसम्म पानी आइसक्थ्यो । ”
अब चारैवटा प्रवेशद्वार पुनः जडान गरेपछि मात्र पानी पथान्तरण गरिने छ । शाक्यका अनुसार दुईवटा गेटको फ्रेम भारतबाट आइसकेका छन्, बाँकी दुईवटा आउँदै छन् । आएका फ्रेम जडानको काम भइरहेको छ । गेटसँगै कोरोना महामारीको पाँच महिने बन्दा बन्दीले पनि ढिलाइ गराएको मन्त्रालयको दाबी छ । शाक्य भन्नुहुन्छ, “लकडाउनमा पूर्ण क्षमतामा काम हुन पाएन ।
करिब ४५ प्रतिशत मजदुरले मात्रै काम गरे, अरू घर फर्किए । निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा पनि ढिलाइ भयो । ” अहिले मेलम्चीमा अस्थायी डाइभर्सनको काम भइरहेको छ । त्यस बाहेका सुरुङ परीक्षण र हेडवक्र्सको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । सुरुङ फिनिसिङको एक वर्षे सम्झौताको म्याद अक्टोबरमा सकिएको छ ।
को’रोनाले प्रभावित भएको भनेर छ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने सरकारी भनाइ रहेको समितिका प्रवक्ता रोजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो। हेडवक्र्स निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । यसको अवधि २०७७ माघसम्म हो । काम भइरहेकाले सम्झौता अवधि मै सकिने सम्भावना रहेको पन्तको भनाइ छ ।
बन्दाबन्दी अघि राम्रोसँग काम भएकाले खासै प्रभाव नपर्ने समितिको अनुमान थियो । प्रवेशद्वार भत्किएपछि र कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भएपछि तीन महिनाअगावै सकेर बोनस खाने ठेकेदार कम्पनीको लक्ष्य प्रभावित भएको छ। मेलम्ची आयोजनाको हालसम्मको अवस्था भने सन्तोषजनक नै रहेको समितिले जनाएको छ ।
Previous articleउषा ठकुरी बनिन् बेलायती नौ’सेनामा आ’वद्ध हुने पहिलो नेपाली महिला
Next articleआज ९ गतेका मुख्य समाचार | अविबाहित पुरुष र महिलालाई भत्ता,को*रोना औ*षधि,School Bus Bank